Otu esi etinye Steam na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 13, 2021 June 28, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Steam dị ka ngwugwu .Deb
Otu esi ebido onye ahịa Steam
Steam bụ egwuregwu egwuregwu vidiyo nke Valve mepụtara. Ewepụtara ya dị ka onye ahịa sọftụwia kwụ ọtọ na Septemba 2003 ka ụzọ Valve na-enye mmelite akpaka maka egwuregwu ha wee gbasaa gụnyere egwuregwu sitere n'aka ndị mbipụta nke atọ ma ugbu a na-etu ụlọ ọba akwụkwọ juputara na puku kwuru puku ma ọ bụrụ na ọ bụghị iri puku kwuru iri puku egwuregwu n'ofe niile. egwuregwu consoles.
Mgbe nkuzi, ị ga-ama otu esi etinye Steam na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị sistemụ nrụọrụ.
Ihe ngwugwu achọrọ: wget, snap
Site na ndabara, Ubuntu 20.04 anaghị eso Steam, yabụ ị ga-eji aka tinye ngwa Steam. Ị ga-mkpa ibudata nwụnye .deb faịlụ dị na Steam's ebe nchekwa wee mee ya site na iji akara ahịrị iwu gị.
Iji mee nke a, mepee ọnụ ọnụ gị site na menu ngwa, wee tinye iwu a ka ibudata ya .deb ngwugwu dị ka ndị a:
Na-esote, ị ga-eme ihe .deb ngwugwu ebudatara na ebe nchekwa Steam site na iji iwu a:
Mgbe ị na-etinye Steam site na iji ngwugwu .deb, ọ ga-etinye onwe ya na-akpaghị aka na ndepụta nchekwa gị iji nweta mmelite n'ọdịnihu. Ị nwere ike nyochaa nke a site na-agba ọsọ iwu amụma apt-cache:
Site na ndabara, Steam kwesịrị ịmalite windo ozugbo ozugbo etinyere ngwugwu .deb.
Ọ bụrụ na nke a emebeghị, ịnwere ike ịmalite ngwa ahụ. Ị nwere ike pịnye iwu na-esonụ na njedebe iji malite:
Nhọrọ ọzọ bụ ịgba ọsọ Steam n'azụ wee gaa n'ihu na-eji ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi Ngwa> Steam. Ọ bụrụ na ịgaghị achọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Na iji oge mbụ, ị ga-achọpụta na Steam ga-emepụta ngwa ngwa akara ngosi desktọpụ, wee mepee windo ọnụ ọnụ ọhụrụ na-agwa gị na ọ kwesịrị ịwụnye ngwugwu ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na achọrọ, tinye paswọọdụ sudo gị ka ịga n'ihu; ozugbo etinyere ngwungwu ole na ole ndị a, ngwa ngwa ọhụrụ ga-apụta na-agwa gị maka ngwungwu kachasị ọhụrụ gụnyere na mkpokọta.
ụdị "Y", pịa pịa “Banye bọtịnụ” ịga n'ihu na nwụnye.
Mara, a ga-akpali gị ka ịpịa igodo nloghachi (tinye igodo).
Na njedebe ka ịmalite Steam graphical UI. Ozugbo emechara nke a, Steam ga-ebudata mmelite onwe ya.
Na mgbakwunye, ọ ga-abụrịrị na a ga-akpali gị maka ngwungwu ndị ọzọ ịwụnye.
Dị ka agba nke mbụ, ị ga-enweta ndepụta zuru oke nke ngwugwu a ga-etinye.
N'ikpeazụ, dị ka agba nke mbụ nke ngwungwu ndị ọzọ, a ga-akpali gị ka ịpịa ya igodo nloghachi (tinye igodo).
N'ikpeazụ, mgbe nkeji ole na ole nke ịwụnye ngwugwu ọzọ maka Steam, ị ga-ahụ nbanye ahụ. Jiri akaụntụ gị dị ugbu a ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ iji banye n'ọbá akwụkwọ Steam.
Ozugbo ịbanye, ị ga-abịa na isi Steam UI, ebe ị nwere ike chọgharịa n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ chekwaa wee gaa n'ihu ibudata, wụnye na igwu egwuregwu nke nhọrọ gị.
Ị mụtala ịwụnye ngwa Steam na nwa afọ na sistemụ arụmọrụ gị. Site ebe a, ị nwere ike debanye aha maka akaụntụ efu wee malite ịchọta egwuregwu efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ. Ọbá akwụkwọ dị na Steam buru ibu, yana na Linux na-achịkọta uzuoku, ọ bụ oge tupu enwere ọtụtụ nhọrọ maka egwuregwu na Linux dị ka enwere na Windows.
Categories Ubuntu Tags Steam, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo